ဆိုဖာအိပ်ယာ, ဆိုဖာ, lin ည့်ခန်း, အပိုင်းဆိုဖာ, မွေ့ရာနှင့်ကုလားထိုင်မော်ဒန်နှင့်အတူ, ဥရောပ, Chesterfield စတိုင်
ကျော်လွန် 35 နှစ်ပေါင်းများစွာယုံကြည်ရသော ODM & OEM အတွေ့အကြုံရှိသည်
Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd. စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 1985 နှင့် Shunde တွင်တည်ရှိသည်, ဖoshanမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်. ကျနော်တို့anရိယာဖုံးအုပ် 50,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ပတ်သက်။ မှတ်ပုံတင်မြို့တော်2အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း.
Baotian ဆိုဖာကုတင်ထုတ်လုပ်သူသည်ဆိုဖာထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်, ဆိုဖာအိပ်ယာ, လျှပ်စစ်အိပ်စက်, မွေ့ရာနှင့်အိပ်ရာဘောင်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိုတယ်စီမံကိန်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်, လက်ကား, နှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ.
အင်္ဂလိပ်စတိုင် L ပုံစံထည်အိပ်ရာ living ည့်ခန်းတော်ဝင်ကဏ္alဆိုဖာ. ခရမ်းရောင်စပျစ်သီး, ရင်ခုန်စရာနှင့်ကြော့, စပျစ်ရည်ကိုမြက်မြည်းစမ်းခြင်းမှခံစားမှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်. သင့်ရဲ့ဝယ်လိုအားမှချိန်ညှိ headrests လိုက်လျော, သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ကိုင်ထားပါ. သံမဏိဘောင်နှင့်ထိုင်ခုံခုံများတွင်အိတ်ကပ်ပါ ၀ င်မှုသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူထိုင်ခုံခံစားမှုကိုအတူတကွခံစားစေသည်.
chaise နှင့်အတူ Chesterfield ဆိုဖာ ငါတို့ထက်ပေါ့ပါးပြီးပျော့ပြောင်းသည်, အရာပုံမှန်ဂန္ Chesterfield ဆိုဖာပေါ်ကြာပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်းနွမ်းသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သော်လည်း၎င်းကို ပို၍ ခေတ်မီသောခံစားမှုပေးသည်. Chesterfield ရဲ့ tufting အမျိုးအစားအပေါ်အခြေခံသည်, ကျနော်တို့က၎င်း၏ရိုးရာလေးလံသောပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသည်.